Toro-hevitra ho an'ny Mampiaraka ny Vehivavy Arabo Mampiaraka Soso-kevitra
Toro-hevitra ho an’ny Mampiaraka ny Vehivavy Arabo Mampiaraka Soso-kevitra
Fiarahana Arabo ny vehivavy no matetika dia ny fizotry ny fifidianana vady mendrika. Amin’izao fotoana izao, be dia be ny vehivavy Arabo dia afaka hifidy ny daty ary koa afaka mampiasa ny Aterineto mba hihaona olona. Zavatra iray izay tsy niova, na izany aza, dia miaro ny vehivavy ny hatsaran-toetra sy laza no tena zava-dehibe indrindra rehefa mampiaraka. Na izany aza, ny foto-kevitra ny hampiaraka ny vehivavy Arabo dia samihafa arakaraky ny faritra sy ny fanazavana eto ambany mba hanampy mba misy olona liana amin’ny mampiaraka ny vehivavy Arabo.
Maro ny Arabo fianakaviana, indrindra ireo avy amin’ny faritra Afovoany Atsinanana sy ny faritra Golfa mino nandamina ny fanambadiana ary koa indrindra ny vehivavy Arabo dia tsy mahazo daty alohan’ny fanambadiana. Zava-mahazatra ho an’ny lehilahy iray miankin-doha amin’ny ny vehivavy havany mba mahita vady eo anivon ireo namany. Amin’ny miely manerana ny toeram-pivarotana lehibe, na izany aza, ireo efa malaza ny toerana fivoriana ho an’ny tanora lehilahy sy ny vehivavy. Ao amin’ny faritra Golfa, ôfisialy ny fifandraisana voamariky ny fanambadiana dia fifanarahana sy ny olona mitondra ny ho avy ampakarina fanomezam-pahasoavana toy ny firavaka sy ny ditin-kazo manitra isaky izy nitsidika azy. Rehefa ny vehivavy Arabo dia mampiaraka, dia matetika mitandrina izany zava-miafina izany, mba hiarovana ny laza sy ny fianakaviany ny laza. Ny henatra dia tsy horaisina ho afa-maina amin’ny kolontsaina Arabo, ary raha ny Arabo no zavatra manahirana na mahamenatra, dia tsy misy vokany eo aminy fa ny fianakaviana manontolo ihany koa. Satria ny vehivavy Arabo dia tokony ho mpandala ny nentin-drazana, ny vintana mahita ny olona iray mba hanambady mety ho simba raha toa ka mahazo laza ratsy ny maha-olona iray izay mandeha avy amin’ny isan-karazany ny olona. Ahoana ny fihetsik’i, ary na ny olona tsaho momba azy dia tena zava-dehibe mba hanampiana ny mpiambina azy ny lazany. Virjiny dia mbola nomem-boninahitra ny Arabo, ny kolontsaina, ary indrindra ny vehivavy Arabo te-hitandrina ny virjiny mandra-pahatonga ny fanambadiana.
Ity koa no hita ho toy ny misaintsaina ny voninahitry ny fianakaviana
Vao haingana, be dia be ny Arabo ny lehilahy sy ny vehivavy izay daty mety manao firaisana ara-nofo asa fa mbola tsy manana firaisana. Ao amin’ny fiaraha-monina Tandrefana izany dia mora kokoa ho an’ny tontolo Arabo ny vehivavy ho amin’ny daty tsy Silamo ny olona noho ny fisokafana ny mifangaro-lahy sy ny vavy sy ny fifandraisana any am-pianarana na any am-piasana. Na dia intermarriages ivelan’ny finoana Silamo hitranga, dia mbola tena tsy fahita firy. Na izany aza, nanana fahafahana hanana ny fahafahana hanatrika sekoly ary mandeha miasa amin’ny firenena Tandrefana ihany koa ny mamela ny vehivavy nitsena ny olona sy ny handeha amin’ny ‘miafina,’ daty. Arabo ray aman-dreny any andrefana hitady fomba hafa ho an’ny zanany mba hihaona tendrena ho vady. Matetika izy ireo mandamina ny zava-mitranga toy ny hafainganam-pandeha-mampiaraka fotoam-pivoriana sy alalan’ny fanambadiana fiaraha-misakafo izay afaka hihaona amin’ny mety ho vady ao amin’ny tena nanara-maso ny tontolo iainana. Na izany aza ny olona, dia mbola afaka mifanerasera amin’ny alalan’ny aterineto toerana izay afaka hiresaka sy mihaona ny olona amin’ny alalan’ny fiaraha-mientana ifampizarana namana. Tsy ho gaga ianao, raha mampiaraka ny vehivavy Arabo izay mitondra miaraka amin’ny chaperone ny namana na ny fianakaviana, satria izany no ara-dalàna ny toe-draharaha na dia eo amin’ny fiaraha-monina Tandrefana satria ny foto-kevitra ny mampiaraka dia hentitra voarara ao Islam. Na dia ny lehilahy sy ny vehivavy dia mahazo misafidy ny mpiara-miombon’antoka, ny ray aman-dreny dia mbola nandray anjara tamin’ny dingana. Ankoatra ny fianakaviana, ny fanajana, ny laza ary ny hatsaran-toetra ianareo eo Arabo kolontsaina, ny fampianarana dia tena zava-dehibe, rehefa mampiaraka ny vehivavy Arabo. Ny fianakaviana dia mahita ny fanabeazana tahaka ny fomba ny ho afaka ho azo antoka ny ho avy ho an’ny vavy. Nahazo diplaoma niaraka tamin’ny mari-pahaizana licence na, dia tsara kokoa, post-nahazo diplaoma diplaoma manome tombony rehefa mampiaraka ny vehivavy Arabo. Veronica Romualdez manana ny folo taona nanoratana ny traikefa, izay ahitana an’arivony lahatsoratra izay efa navoaka an-tserasera ary koa barotra dika mitovy ho an’ny fivarotana an-tserasera. Izy no nanoratra e-ny fianarana fiofanana ara-nofo sy ara-teknika sy ny fampianarana boky. Izy mihazona ny Bachelor of Arts ao amin’ny fitaovam-pifandraisana sy ny vita ny mazava ho azy fa ny ao anatiny endrika
← Arabo online dating - Video Search Engine amin'ny Fikarohana
Fandikan-teny saka teny arabo, Anglisy, frantsay, arabo Reverse →